सुशील कोइरालाका लागि बुक थियो टिचिङको बेड नं ६०१ – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / समाचार / सुशील कोइरालाका लागि बुक थियो टिचिङको बेड नं ६०१
सुशील कोइरालाका लागि बुक थियो टिचिङको बेड नं ६०१
February 9, 2016 समाचार Leaveacomment
माघ २६ । अवस्था जटिल हुँदै जान थालेको आशंका भएपछि हिजो (सोमवार) विहान मैले त्रिवी शिक्षण अस्पताल ९टिचिङ०को बेड नं. ६०१ बुक गराएँ । अस्ति (आइतवार) देखि केही नखाएको मान्छेले हिजो विहान फेरि एक कचौरा जाउलो खानुभएछ । दिउसो शशांक दाई ९शशांक कोइराला०लगायत हामी त्यही बस्यौं । दिउसो फेरि दुई कचौरा जाउलो खानुभयो । खान थालिहाल्नुभयो, अवस्था सुधिन थालेको छ । किन अस्पताल लैजानु रु भनेर सल्लाह भयो । त्यसपछि मैले अस्पतालको दिउसो चार बजेतिर बेड बुकिङ क्यान्सिल गरेको हुँ ।
बेलुका चार बजेतिर आफ्नो अरु काममा निस्किएँ र त्यतैबाट आठ बजेतिर घर फर्किएको थिएँ । त्यतिबेला फेरि फोन आयो, ‘अलि गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ, डाक्टरसाप आउने हो कि ।’ मेरो गाडीमा तेल सकिएको रहेछ । गाडी मगाएर ९ बजे त्यहाँ पुगें ।
पुग्दा उहाँ ठिकै हुनुहुन्थ्यो । अवस्था यसरी प्रतिकूल होला भन्ने सोचाइसम्म पनि भएन । ब्लडप्रेसर राम्रै थियो, अरु अवस्था पनि खासै विग्रिएको थिएन । मैले नआक्तिन आग्रह गरेर करिव साढे १० बजेतिर घर फर्किएँ । फेरि सवा ११ बजेतिर फोन अयो, ‘स्याचुुरेसन घटेर ७५ पुग्यो के गर्ने रु’ मैले फोनमै अस्किजन बढाउन भनें । फेरि हतारिँदै गए । सवा ११ बजेतिर म पुग्दा ब्लडप्रेसर लो भएको थियो । उहाँ छटपटि रहनु भएको थियो । अवस्था हेर्दा खाने एक्टिबायोटिकले नछोएजस्तो देखियो । इन्जेक्सन लगाउने योजना बन्यो । टिचिङबाट मैले नै इन्जेक्सन लिएर गएर लगाइयो । दिउसो नै ‘थप नर्स र डाक्टर खटाएर एन्टिबायोटिक दिने कि रु’ भन्ने कुरापनि भएको हो । तर, अवस्था सुध्रिएकै थियो भनेर हेरिएको हो । दुई कचौरा जाउलो खाएको घटनाले हामीलाई ‘कन्फ्यूजन’ गरायो ।
राति मैले टिचिङबाट इन्जेक्सन लिएर गएँ । लगाएँ । आफैले अब्जरवेसन गरें । अवस्था झनै विग्रदै गयो । यही बिचमा एम्बुलेन्समा अस्पताल लैजाने कि भनेर सोचाई पनि बन्यो । एम्बुलेन्स बोलाउने प्रयास गर्दागर्दै उहाँलाई जोगाउन सकिएन । (प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधनबारे उनका निजी चिकित्सक डा करबीरनाथ योगीको कुराकानीमा आधारित एक अंश स्वास्थ्य खवरबाट)
Previous राष्ट्रिय सरकार गठनमा किन गयो प्रचण्डको ध्यान ?
Next कोइरालालाई किन लगिएन अस्पताल ?